Anjaran'ny Ceni-t ny mampilamina an'i Madagasikara
2013-12-21 @ 08:46 in Politika
Dia azo tohizana ihany koa ny lohateny hoe dia miaraka amin'izay ihany koa ny CES na ny Fitsarana Manokan'ny Fifidianana. Hatreto dia ireo sisa no azo antenaina hampilamina tsy misy raorao an'i Madagasikara.
Voalohany, toy ny nanao zavatra tsy milamina loatra ny tao amin'ny kandidà sy ny mpanohana azy ireo tsirairay avy. Niainga izany tamin'ny fivoahan'ny didy hitsivolana tsy fanta-piaviana izay nahafahan'ny sasany nandika lalàna maro dia maro sy nahafahana nampiova zavatra maro dia maro teo amin'ny fampandresen-dahatra ny mpifidy. Dia talanjona ny rehetra avy eo fa vita tanteraka ny fampielezan-kevitra vao nofoanan'ny CES izay didy hitsivolana izay. Mampiahiahy tanteraka mitondra mankany amin'ny tsi fitokisana ny CES izay toe-javatra izay satria moa ve mitarika ho amin'ny fanilihana ny kandidà iny fandikan-dalàna miharihary iny? Tadidio fa ny minisitry ny serasera no nandika voalohany ny lalàna tamin'ny fanatrehana propagandy ampahibemaso dia nivoaka avy eo ny fomba fijery sy didy niaro ny zavatra nataony... dia niitatra tsikelikely izay toe-javatra izay nefa tsy nisy fanamelohana avy any amin'ny Fitsarana.
Faharoa, efa nasehoko teto ny tsy fisian'ny mangarahara mihitsy avy amin'ny voka-pifidianan'ny ceni-t tamin'ny fihodinana voalohany ary tsy niezaka ho amin'ny fanazavana sy ny fandresen-dahatra mihitsy ry zareo fa nanosika hatrany ho any amin'ny tian-kano tsy tian-kano. Dia tsy nisy mihitsy ihany koa ny filazana fahavononana hanao ny tsara kokoa sy ny hampisy ny mangarahara, izay niainga avy amin'ny lisi-pifidianana mihitsy aloha voalohany indrindra, tsy lazaina intsony avy eo ny ahiahy teo amin'ny voka-pifidianana. Tokana ihany no takiana amin'ny Ceni-t mba haharesy lahatra tsara ny olona, avoahy mangarahara ny voka-pifidianana sy ny kajy rehetra. Efa tsy miteny intsony ny nandrafetana ilay lisi-pifidianana izay efa tsy milamina aza aho amin'io fotoana io. Raha tontosa soa aman-tsara io mangarahara io ka mampikombona izay mety ho tsikera rehetra, dia manampy be dia be ho amin'ny fampitoniana ny fon'ny mpanohana tsirairay avy izany ary hahaizany mionona,saingy tsorina kosa aloha fa lavitry ny afo ny kitay amin'izay fotoana izay.
Fahatelo, Efa nofoananareo CES ary iny ilay didim-panjakana niteraka fiovan-javatra be dia be teto amin'ny firenena dia ahoana ny tohiny? Izaho manokana dia mahafantatra fa niainga avy amin'ny vokatry ny Ceni-t ihany no namoahanareo ny vokatra tamin'iny fihodinana voalohany iny fa resaka be fotsiny ny ankoatra izay. Samy mpahay lalàna ianareo rehetra ao ary mahay ilay fomba fiteny hoe "Dura Lex,Sed Lex" izay araka ny nolazaina tamiko ny dikany dia manao hoe "Mafy mafaitra ny lalàna, fa izay no lalàna". Ampiharinareo hatramin'ny farany ve izany sa mbola misy olona heverinareo ho amboninareo ka afaka manome baiko anareo hatrany? Raha manambara ny lalàna hoe "Mihintsana (disqualifé) izay nanao fihoara-pefy nampiova ny safidim-bahoaka" dia hotontosainareo ve izany? Sa manao izay hampandresena izay tian'ny sasany handresy fotsiny ianareo? Nefa raha tanterahanareo hatramin'ny farany ilay "Dura Lex Sed Lex" dia mety hiteraka fanantenana eo amin'ny rehetra ihany izany.
Farany izay nofinofy tsy ho tanteraka, raha vonona tsy manana tahotra mampihatra ny dura lex sed lex ny mpitsara hany mahefa ity fifidianana ity dia tokony hihintsana ny kandidà laharana fahatelo saingy tsy hisy izany raha ny fijery ny zavamisy. Azo nofisina ihany koa ny hamerenana indray ny fihodinana faharoa mba hahafahan'ny tsirairay manarina ny tsy mety nataony saingy lasa nofin-jaza ihany koa izany, satria miankina amin'ny didin'ny mpitsara izany fa hahavita izany ve ireo? Tsy mbola nahita na nahare aho fa mba ilazao ihany raha mahafantatra ianareo hoe naverina mihitsy ny fifidianana fihodinana faharoa rehefa tsy sahy ny manintsana avy hatrany ny nahazo vahana tamin'ny tsy fampitoviana vintana sy lenta ny kandidà roa tonta.
Fehiny, afa-mionona ny resy raha manjaka ny mangarahara fa anjaran'ny ceni-t manontolo sy samirery ny mamoaka ny mangarahara tsy misy pentina sy tsy misy afenina amin'ny voka-pifidianana. Anjaran'ny kandidà tsirairay avy ny mampiray hina ny Malagasy rehetra tsy misy anavahana sy tsy misy fanilikilihana mba hitodika amin'ny fampandrosoana amin'izay.
Jentilisa 21 desambra 2013